हुण्डीले यसरी फैलाउँदैछ छायाँ अर्थतन्त्र | E-Highway News
साढे ३३ किलो सुन तस्करी काण्डसँग जोडेर करोडौं रुपैयाँ मूल्य बराबरको सुन चोरी-पैठारी भएर नेपाल आउने विषय छरपष्ट भएको छ । विभिन्न समयमा अवैध हतियार र लागुऔषध पनि बरामद हुने गरेका छन् । यस्ता अवैध कारोबारसँगै वैध कारोबारमा पनि भन्सारबाट न्यून विजकीकरणमार्फत् वस्तु भित्रिरहेका र त्यसबाट अपेक्षित राजश्व असुल नभएको कुरा छर्लङ्गै छ ।
नेपालबाट पूँजी पलायन भएर विदेश जाने, त्यहाँ काम गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति पनि वैधानिक बाटोबाट नेपाल नआउने र विदेशी मुद्राको सरकारी खाता (विप्रेषण खाता) सदैव घाटामा रहेको कुरा पनि हामीले लामो समयदेखि सुन्दै आएका छौं ।
आखिर यो कसरी हुन्छ ? तस्करीका सुनदेखि अवैध हातहतियार र लागुपदार्थको मूल्यको भुक्तानी विदेशमा कसरी हुन्छ ? नेपालका उद्योग/व्यापार सधैं घाटामा गएको देखिने तर तिनै औद्योगिक घरानाका विदेशमा ठूला उद्योग/कम्पनी संचालनमा रहने, यो कसरी संभव छ ?
व्यवसायीले गर्ने न्यून बिजकीकरण र नाफाका लागि सरकारी निकायले गर्ने अधिक बिजकीकरणको भुक्तानी र हिसाब मिलान कसरी हुन्छ ? प्राकृतिक स्रोतसाधन (जंगल, जडीबुटी, गिट्टी, ढुंगा, बालुवा आदि) को भुक्तानी कसरी प्राप्त हुन्छ ? विदेशी कामदारले पठाएको पैसा फोन गर्न नपाउँदै घरमै नगदमा भुक्तानी प्राप्त हुने रकमको अभिलेख र विदेशी मुद्रा सरकारी खातामा किन आउँदैन ? यी तमाम प्रश्नको जवाफ एउटै छ-नेपालमा दिनानुदिन हुण्डीको कारोबार फस्टाइरहेको छ ।
हुण्डी के हो ? यसबारेमा अनेक व्याख्या सुनिन्छ । हुण्डीमा बैंकको प्रयोग हुँदैन र नेपाली रुपैयाँमा कारोबार भएको रकमलाई कसरी हुण्डी भन्ने ? सहकारीबाट निकालेको रकम कसरी हुण्डी हुन्छ ? हाम्रा कानून व्यवसायी र न्यायिक निकायले पनि यसैगरी प्रश्न गर्छन् ।
अनि हाम्रा कानूनले पनि स्पष्ट रुपमा हुण्डीको परिभाषा नगरेको र वि.सं. २०१९ सालमा तत्कालिन परिस्थितिअनुसार निर्माण भएको विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन- २०१९ अनुसार हुण्डीसम्बन्धी अपराधलाई पनि जबर्जस्ती अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने गरिएको वर्तमान परिस्थितिमा यसको फाइदा उठाउँदै सम्पूर्ण छायाँ अर्थतन्त्र (स्याडो इकोनोमी) हुण्डीकै माध्यमबाट फस्टाएको पाइन्छ ।
चुहावटका कारण मुलुकलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व प्राप्त नहुनुमा पनि हुण्डीले नै सहयोग पुर्‍याइरहेको देखिन्छ । तसर्थ हुण्डीको स्पष्ट अवधारणा बुझ्न केही उदाहरण हेर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कोरीयामा काम गर्ने कुनै कामदारले नेपालमा आफन्तलाई पैसा पठाइदिएको जानकारी दिन फोन गर्छ । त्यसका लागि उसले कुनै सम्पर्क नम्बर वा कोड दिन्छ । त्यसको ५ मिनेट नभइ उक्त सम्पर्क नम्बर वा कोडबाट नेपालमा भुक्तानी प्राप्त हुन्छ । भुक्तानी नगद चेक वा बैंक खातामा जे पनि हुन सक्छ ।
अष्ट्रेलियामा पढ्ने विद्यार्थीलाई रकम पठाउन अभिभावकले यहाँ कुनै मान्छेसँग सम्पर्क गरी रकम हस्तान्तरण गर्छ । त्यसको केही क्षणमै त्यहाँ रकम भुक्तानी हुन्छ ।
हङकङमा बसाइँ सरेको पूर्वलाहुरेले घर बेचेको पैसा नेपालमा कसैलाई भुक्तानी गर्नासाथ त्यहाँको बैंक खातामा जम्मा भएको पाउँछ ।
मलेसियामा काम गर्ने कर्मचारीले आफूले भुक्तानी लिनुपर्ने तलब भुक्तानी लिनु पर्ने समय आउन नपाउँदै यहाँ कुनै अर्कै व्यक्तिले नेपाली मुद्रामा घरमै भुक्तानी गरिदिन्छ ।
यी हुण्डीको कारोबार गर्ने तरिकाका एक-दुई वटा उदाहरणमात्र हुन् । यस्ता धेरै प्रक्रिया र माध्यम हुन सक्छन् । तर, यथार्थ नेपालभित्र हुण्डीको कारोबार नेपाली रुपैयाँमा नै हुन्छ र यसमा नेपालकै बैंक र सहकारी आदिको सहयोग हुन्छ ।
हुण्डीमा विदेशबाट नेपाल आउनुपर्ने रकम नेपाल आएको र नेपालबाट विदेश जानुपर्ने रकम विदेश गएको दुवै हुन्छ । तर, यी सबै कारोबार राष्ट्रिय तथ्यांक वा राज्यको जानकारीभन्दा बाहिर हुन्छ । राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने विदेशी मुद्रा छायाँ अर्थतन्त्र वा गलत क्रियाकलापमा प्रयोग हुन्छ र यसबाट अवैध गतिविधि, आर्थिक अपराध र अन्य अपराधिक गतिविधिले प्रोत्साहन पाउँछन् ।
तस्करी भएर आउने त्यति ठूलो परिमाणको सुनको भुक्तानी विदेशमा यही हुण्डीको माध्यमबाट बाहेक अन्य कुनै तरिकाले हुनै सक्दैन र सुन जस्तो वस्तु भुक्तानी नभइ आउने कल्पना पनि त गर्न सकिँदैन ।
May 17 2018 04 : 07am । 109
May 17 2018 04 : 04am । 150